Sihlalutya iWiko UPulse, iselfowuni enekhamera elungileyo kunye nexabiso eliphezulu | Iindaba zeGajethi
URuben inyongo | | Reviews
UWiko wazalelwa eMarseille (eFrance) ngo-2011. Kuyo yonke le minyaka sele isasazeke kumazwe amalunga nama-30 kwaye kuphela kunyaka ophelileyo ikwazile ukuthengisa iitheminali ezili-10 lezigidi.
Inkampani ineetheminali ezahlukeneyo kwikhathalogu yayo kwaye sinokufumana iindlela ezahlukeneyo kakhulu ekubhekiswa kuzo kungeniso okanye kuluhlu oluphakathi. Kule yokugqibela sifumana umlinganiswa wethu ophambili: U-Wiko UPulse esichithe naye iiveki ezidlulileyo sizama ukumazi ngokusondeleyo kwaye ndikuzisele ngokwakho ukubonakala kwethu. Ngaphambi kokuba siqale kufuneka sikuxelele ukuba kule Wiko UPulse kukho ukukhanya nesithunzi. Kwaye silindele ukuba inqaku elime kakhulu kuyo yikhamera yayo. Kodwa ukuqhubeka ndikunika iinkcukacha ezingaphezulu
2 Amandla kunye nememori
3 Ikhamera yeWiko UPulse: mhlawumbi yeyona ilungileyo isetiweyo
4 Inkqubo yokusebenza kunye nokunxibelelana
6 Ixabiso kunye noluvo lomhleli
7 Iinkonzo kunye neengozi zeWiko UPulse
I-Wiko uPulse ihamba phakathi kwamanqanaba amabini: asezantsi naphakathi. Kwaye into yokuqala eya kuthi ibambe ingqalelo yimo yayo kwaye inkampani yaseFrance ithathe isigqibo sokubheja kwinyithi yentsimbi endaweni yeplastiki okanye ipolycarbonate enzima. Kwakhona, isikrini sayo sifikelela kwifayile ye- 5,5 i-intshi idiagonally, nangona ufumana isisombululo se-HD kuphela (Iipikseli eziyi-1.280 x 720). Ngokwenkampani, le paneli ibonelela ngokukhanya kweenithi ezingama-500, nangona ngaphandle siqaphele ukuba kuya kufuneka sibheje kwinqanaba elithile eliphezulu ukuze sikwazi ukwahlula kakuhle umxholo oboniswayo. Ngoku, kuyinyani ukuba ngobukhulu bekhusi umsebenzisi kuya kufuneka askrole kancinci kwaye angafunda kamnandi ngakumbi kwaye onwabele iividiyo ezifanelekileyo.
Isigqubuthelo esingasemva sinobungqangi kwaye sinokususwa. Isizathu silula: U-Wiko akakhange akhethe i-SIM kunye nememori khadi yokwandiswa kumacala e-chassis kwaye ufuna ukuyibeka ecaleni kwebhetri. Kwelinye icala, le yokugqibela ayinakususwa, idatha esiyifumene njenge-negative. Eminye, siselfowuni efanelekileyo ukuphatha ezandleni zakho. Kwaye ngenxa yemathiriyeli esetyenzisiweyo, iziva imelana.
Amandla kunye nememori
I-Wiko UPulse ithwala ngaphakathi Iprosesa ye-4-core isayinwe yiMediaTek. Imodeli ngqo yi-MTK6737 ene-frequency esebenzayo ye-1,3 GHz.
Kule chip kufuneka sidibanise I-3 GB ye-RAM kunye ne-32 GB yendawo yangaphakathi ukugcina yonke into ethi qatha engqondweni. Ngala manani siyakuqinisekisa ukuba imisebenzi yemihla ngemihla iya kwenziwa ngaphandle kwengxaki kwaye nobushushu obaneleyo. Ngaphezu koko, ukuba nezicelo ezahlukeneyo ezivulekileyo ezisebenza ngasemva aziyi kwenza ukuba i-smartphone yesiFrentshi iphazamisane nayo.
Ngoku, sivavanye imidlalo ethile kwaye inyani yile izixhobo azenzelwanga le njongo. Oko kukuthi, kuya kuba kule ngqondo apho sivuma kakhulu iprosesa enayo ngaphakathi. Kodwa siyaphinda ukuba ngaphandle kwalo mbandela, iWiko UPulse isebenza kakuhle kwaye kakuhle.
Njengoko besibonisile ngaphambili, ngokunyusa isiciko sangasemva uya kuba nakho ukufaka imemori khadi kuyo I-MicroSD efikelela kwindawo ephezulu ye-128 GB.
Ikhamera yeWiko UPulse: mhlawumbi yeyona ilungileyo isetiweyo
Siza kuqala ngeyona ndawo imbi kakhulu yekhamera ehamba nesiphelo. Kwaye kwinxalenye yokurekhoda ividiyo: unokufikelela kuphela kwisisombululo esiphezulu se-720p (HD). Oku mhlawumbi kukukhubazeka xa usenza isigqibo. Kwaye inyani kukuba inkampani yaseFrance ibinokucinga ngokunyusa esi sisombululo inyathelo elinye ukuya phambili kwaye isondele ngakumbi kuluhlu oluphakathi. Nangona kunjalo, apho oku kubonakala khona Ikhamera yemifanekiso yesisombululo se-megapixel eyi-13 ifota imifanekiso kwiifoto. Kuyinyani ukuba ikhamera iya kusebenza ngcono kwiindawo ezikhanyisiweyo kunakwimeko zokukhanya eziphantsi. Kodwa kule ndlela yokugqibela iziphatha ngokungaphezulu kukhuphiswano oluthe ngqo; Kukho iitheminali zenqanaba lokungena apho ingxolo kwiifoto zasebusuku ziphezulu kangangokuba zonke iinkcukacha zishiyiwe.
nayo, ikhamera yeWiko UPulse ine "Super Pixel" imowudi efumana izifinyezo sama-megapixels angama-52 okusombulula kwaye kwinqanaba eliphezulu leenkcukacha kufezekiswa ukuba siyasondeza kuwo. Kwangokunjalo, usetyenziso lokufota kwesi sisiphelo seWiko likuvumela ukuba ufake amacebo okucoca ulwelo ekugqibezeleni ubugcisa obuninzi.
Ngaphambili siya kuba nekhamera (I-megapixels ze-8 resolution) kwaye oko kuyakuvumela ukuba senze iminxeba yevidiyo okanye sithabathe omnye nomnye.
Inkqubo yokusebenza kunye nokunxibelelana
Sijongene ne isixhobo esineSIM slot, ukuze uphathe iinombolo zefowuni kwesi sixhobo. Kuya kufuneka sikuxelele ukuba i-Wiko inenkcukacha kunye nabasebenzisi bayo kwaye inika iadaptha ze-SIM ukuze nje ukuba izixhobo zifike ezandleni zakho ungayisebenzisa ukusuka kumzuzu wokuqala. Ngokunjalo, kwaye njengoko kusenzeka kuninzi lwee-smartphones kwintengiso, iWiko UPulse isekwe kwi-Android, ngakumbi kwi Android 7.0 Nougat. Kwaye nangona ingenguye uguqulelo lwamva nje kwintengiso, kuyavunywa ukuba iinguqulelo ezimbini azikashiywa ngasemva njengoko zisenzeka kwezinye iindlela ezininzi.
UWiko usebenzisa ujongano lomsebenzisi wesiko- iWikoUI ibhaptizwe. Ukusebenza kwayo kuchanekile, kodwa akukho nto ifana ne-Android esulungekileyo kumava olwelo kulo mbandela. Ngoku, kufuneka sikuxelele lonto Ayisiyiyo enye yezona zinto zenziwe ngokwezifiso.
Ngokumalunga nokunxibelelana, esi siginali si iyahambelana ne-LTE (4G); Ine-WiFi, iBluetooth 4.0, iGPS kunye ne-3,5mm jack yomsindo. Uya kuba nayo Isikhululo sikanomathotholo se-FM. Ewe ngokuchanekileyo, uya kuba nakho ukungena kwizikhululo zikanomathotholo ngaphandle kokusebenzisa inqanaba ledatha yakho.
Okokugqibela, ndikuxelele ngasemva kweWiko UPulse siya kuba nomfundi ofunda iminwe. Oku kuya kusinceda ukuvula i-terminal kunye nokwazisa usetyenziso; ukubeka umnwe wakho kuyo xa isixhobo singasebenzi iya kwenza i-terminal ivule kwaye ivule usetyenziso.
Ibhetri ehamba neWiko UPulse ine Umthamo wama-3.000 we-milliamp. Ngokwedatha yenkampani, iya kusinika ukuzimela kosuku lonke ngaphandle kweengxaki. Kwiimvavanyo zethu siphumelele phakathi kwe-5 kunye neeyure ze-6 zesikrini. Nangona kunjalo, lumka, njengamaxesha onke, amanani aya kuxhomekeka kusetyenziso olwenziwa ngumsebenzisi ngamnye kwiyunithi yakhe.
Ixabiso kunye noluvo lomhleli
I-Wiko UPulse siselfowuni egxile kubasebenzisi bazo zonke iintlobo. Ngoku, umenzi ubonakalisa ukuba abantu ekujoliswe kubo ngabona bancinci. Yi efowuni Iyakwazi ukusebenza ngokulula kuyo yonke imisebenzi yemihla ngemihla: ukukhangela kwiwebhu, uthungelwano lwasentlalweni, ukuhlela amaxwebhu eofisi ekuhambeni okanye kulawulo lwe-imeyile. Nangona kunjalo, nje ukuba amandla amancinci acelwe ukuba adlale imidlalo yevidiyo kuGoogle Play, kulapho aqhwalela khona kakhulu.
Inokwakhiwa okuhle kwaye ikhamera yakhe iyothusa kwiligi apho adlala khona. Kulungile ngokuixabiso layo phantse i-euro ezingama-180 linokusibeka kumathandabuzo; kunokwenzeka ukuba ufumane izixhobo ngexabiso elifanayo. Kwaye ngaphezu kwako konke, inika intsebenzo engcono kwimimandla enamandla ngakumbi njengokuzonwabisa.
Uphengululo lwe: URuben inyongo
Iinkonzo kunye neengozi zeWiko UPulse
I-Android 7 Nougat ifakiwe
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Reviews » Sihlalutya iWiko UPulse, iselfowuni enekhamera elungileyo kunye nexabiso eliphezulu